Wararka Dugsiga Minnewashta | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Abriil 19 2021
NAMM waxay u aqoonsan tahay iskuulada, macalimiinta iyo hogaamiyaasha bulshada dadaaladooda muuqda ee taakuleynta waxbarashada muusikada iyo iskuxirka fasalo badan oo kala duwan oo heer sare ah oo muusig ah manhajka asaasiga ah ee iskuulka. Cilmi baarista ku saabsan waxbarashada muusigga ayaa sii waddaa inay muujiso faa'iidooyinka waxbarasho / garasho iyo xirfadeed ee bulsho ee sameeya muusikada. Laba sano ka dib waxbarashada muusikada, cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in kaqeybgalayaashu muujiyeen horumarin wax ku ool ah oo ku saabsan sida maskaxdu u shaqeyso hadalka iyo akhrinta dhibcaha ee asxaabtooda aan ku lug laheyn iyo ardayda ku lug leh muusikada aysan u badneyn inay qalin jabiyaan dugsiga sare, laakiin sidoo kale inaad dhigato kulliyad sidoo kale. Xirfadaha dhagaysiga maalin kasta waxay ku xoog badan yihiin carruurta muusikada lagu baray kuwa aan lahayn tababarka muusikada. Muhiimad ahaan, xirfadaha dhagaysigu waxay si aad ah uguxiran yihiin awooda: in hadalka loo arko asal buuq badan, fiiro gaar ah loo yeesho, oo codadka xusuusta lagu hayo. Noloshii dambe, shakhsiyaadka qaatay casharada muusikada markay carruurtu muujiyaan ka shaqaynta neerfaha ee codka; dhalinyarada waaweyn iyo xitaa dadka waaweyn ee aan ciyaarin qalab ilaa 50 sano ah waxay muujinayaan ka shaqeynta habdhiska neerfaha marka la barbardhigo asxaabtooda. Aan ku xuso, faa'iidooyinka bulshada waxaa ka mid ah xallinta khilaafaadka, xirfadaha wada shaqeynta, iyo sida loo bixiyo loona helo dhaleeceynta wax dhiseysa.